February လမှာ မွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့ အလှပဆုံး ဆယ်ကျော်သက် မင်းသမီးလေးများ... | နေမင်းဇွဲမာန်
February လမှာ မွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့ အလှပဆုံး ဆယ်ကျော်သက် မင်းသမီးလေးများ...
Birth : 2-26-1993
Taylor Dooley ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက အမေရိကန် ဆယ်ကျော်သက် သရုပ်ဆောင်လေး ဖြစ်ပါတယ် ။ The Adventures of Sharkboy နဲ့
Lavagirl in 3D ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ၂၀၀၅
ခုနှစ်မှာ အနုပညာလေးကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သူလေးပါ ။
9. Tiffany Thornton
Birth : 2-14-1992
Tiffany thornton ကတော့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လေးလည်းဖြစ် ၊ ဆယ်ကျော်သက် အဆိုတော်မလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ Tawni Hart ဆိုတဲ့ နာမည်လေးနဲ့ Sonny withaChance နဲ့ So Random စီးရီးဇာတ်လမ်းတွေမှာ လူသိများခဲ့ပါတယ် ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ အနုပညာလောကကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ဆယ်ကျော်သက်လေး ဖြစ်ပါတယ် ။
8. Brooke Scher
Birth : 2-10-1992
Brooke Scher ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မင်းသမီးလေးကတော့ အသက် ၅ နှစ် အရွယ်လောက်ကတည်းက ကလေးသရုပ်ဆောင် နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီး ရွှေတံဆိပ် ရခဲ့တဲ့ ဂျွမ်းမယ်လေး တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ TV series ဖြစ်တဲ့ The Bernie Mac Show နဲ့ AmerAsian ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။
Birht : 2-12-1993
Jennifer Stone ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မလေးကတော့ Harper Finkle ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ Wizards of Waverly Place ဇာတ်ကားမှာ လူသိများခဲ့ပါတယ် ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်လောက် ကတည်းက အနုပညာလောကထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ သူလေးပါ ။
Birth : 2-10-1997
Chloe Moretz ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် သရုပ်ဆောင်မလေးကတော့ အသက် ၇ နှစ်နှစ် အရွယ်လောက်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး 500 Days of Summer, Diary ofaWimpy Kid, Desperate Housewives နဲ့ Dirty Sexy Money ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။ Kick ass ဇာတ်လမ်းမှာ Hit-Girl အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရာမှာ လူသိများခဲ့ပါတယ် ။
5. Meaghan Jette Martin
Birth : 2-17-1992
Meaghan Martin ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးကတော့ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် မလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေဆဲပါ ။
Birth : 2-18-1991
Malesa Jow ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မလေးကတော့ အမေရိကန်သူလေး ဖြစ်ပြီး ဖတ်ရှင်ဒီဇိုင်းဖက်မှာ ထူးခြားအံ့သြဖွယ် ပါရမီပါလာတဲ့ သူလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ CW Season The Vampire Diaries နဲ့ Nickelodeon ဇာတ်ကားတွေမှာ Geena Fabiano အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။
Birth : 2-19-1993
Victoria Justice ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မလေးကတော့ သရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ် ၊ အဆိုတော်လည်း ဖြစ်ရုံသာမက dancer မလေး တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ True Jackson, VP, The Troop, The Penguins of Madagascar and iCarly စတဲ့ စီးရီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး သူမရဲ့ album အသစ်ကို နောက်နှစ်မှာ ထွက်ရှိနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ် ။
Birth : 2-23-1994
ဒီဆယ်ကျော်သက်မလေးကတော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အထင်ရှားဆုံး ရုပ်ရှင်တွေကတော့ The Twilight Saga, Coraline နဲ့ The Runaways ဇာတ်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
Birth : 2-10-1991
Emma Roberts ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်မလေးကတော့ Julia Roberts ရဲ့ သမီး ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အမေလိုပဲ သရုပ်ဆောင်ရာမှာ ကောင်းမွန်ပါတယ် ။ Wild Child, emoirs ofaTeenage Amnesiac နဲ့ Lymelife ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး TV စီးရီးဖြစ်တဲ့ Nickelodeon Channel မှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ။